१२ युरोका लागि मल्लोर्कामा उडान दिनुहोस् - तपाईं यो प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्न! | यात्रा समाचार
जब यो जस्तै प्रस्तावहरू हाम्रो अगाडि आउँदछ, हामी हाम्रो टाउकोलाई अर्को तर्फ मोड्न सक्दैनौं। कुनै पनि भन्दा बढि, किनकि हामीलाई थाहा छ कि त्यस्तो अवसर बारम्बार दोहोर्याउन सजिलो हुँदैन। केवल १२ यूरोको लागि मल्लोर्कामा उडान गर्नुहोस् यो प्रस्ताव भन्दा बढि हो। यद्यपि यो अविश्वसनीय देखिन्छ, यो पूर्ण रूपमा सत्य हो।
साथै, ताकि तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो प्रस्ताव सेप्टेम्बरको सुरूको लागि हो। जुन दिन आउँदा सबै विवरणहरू मिलाउन उत्तम हुनेछ। मल्लोर्काको लागि उडान प्रस्ताव र अवश्य पनि, उत्तम मूल्यमा आवास पनि। के तपाइँ अझै पनी यसलाई शंका गर्नुहुन्छ? ठीक छ, जाँच गर्नुहोस्!
1 १२ युरोका लागि मल्लोर्का उडान
2 मल्लोर्कामा सस्तो होटल
3 मल्लोर्कामा के हेर्ने र के गर्ने
१२ युरोका लागि मल्लोर्का उडान
निस्सन्देह, मल्लोर्कासँग हामीलाई धेरै प्रस्ताव छ। त्यसो भए, यो जहिले पनि आवश्यक गन्तव्यहरू मध्ये एक बन्छ। के हुन्छ त्यो हामी अधिक खर्च गर्न चाहँदैनौं, त्यसैले हामी तपाईंको लागि यो महान प्रस्ताव चयन गरेका छौं। बारेमा कम्पनी संग एक उडान, 'Ryanair' र त्यो यसको प्रस्थान छ बुधवार, सेप्टेम्बर at:०० बिहान :5:०० म्याड्रिडबाट यो एक घण्टा मात्र आधा हुनेछ, किनकि यो सीधा उडान हो।
वापसी सेप्टेम्बर १ on, :13: 21:55 बिहान हुनेछ। तपाईं एक लिन सक्नुहुन्छ केबिन झोलाकिनकी, यदि तपाईंलाई चलानी आवश्यक छ भने, तब मूल्य थोरै माथि जान्छ। हो, यो सत्य हो कि तिनीहरू यस प्रकारका प्रस्तावहरूका विवरणहरू हुन्, तर त्यसो भए पनि, १२.12,95eमात्र यूरो भुक्तानी गर्न को प्रतिरोध गर्न सक्छ? यसको बारेमा अब नसोच्नुहोस् र यसलाई बुक गर्नुहोस् अन्तिम समय.
मल्लोर्कामा सस्तो होटल
पासिंगमा, हामी पनि होस्टिंग मुद्दा समाधान गर्न चाहन्छौं। यो केही हदसम्म जटिल छ, किनकि अझै सेप्टेम्बरमा त्यस समय, मूल्य उच्च रहन्छ। यद्यपि व्यावहारिक समाधानहरू सँधै सस्तो देखिन्छ। यसैले यदि हामीसँग पहिले नै उडान छ, अब यो होटेलको पालो हो। बारेमा एक व्यक्तिको लागि प्रस्ताव, त्यसमा hotel होटेल रातहरू, खाजा खाजा र बेलुका पनि समावेश छ 619 यूरो को लागी। कुनै श doubt्का बिना, यो एक उत्तम प्रस्तावहरू जुन क्षेत्र र निर्धारित मितिहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। के यो अर्को राम्रो विचार होईन? तपाईले आफ्नो आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ Hotels.com.
तपाइँलाई एक विचार दिन, यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, यो बारे हो एक होटल जुन समुद्र तटबाट minutes मिनेट जति छ। योसँग पौंडी पोखरी, साथै जिम र खेल कोठा पनि छ। पाल्माको केन्द्र करिब १ 14 किलोमिटर टाढा छ र एयरपोर्ट केवल kilometers किलोमिटर टाढा छ। यो कोठा र दुबै राम्रो सेवा प्रदान गर्न हरेक दिन काम गर्ने कर्मचारी देखि दुबै राम्रो राय छ।
मल्लोर्कामा के हेर्ने र के गर्ने
कुनै श doubt्का बिना, अनिवार्य स्टप मध्ये एक हो पाल्मा डे मलार्का। शहरको केन्द्रले तपाईंलाई यस शहरको साँघुरो सडकहरूमा खुशी पार्नेछ जब सम्म यो तपाईंलाई पुरानो शहरमा पुर्याउँदैन। थप रूपमा, हामी यहाँ पाएको महान रातको जीवनलाई बिर्सन सक्दैनौं। यो ठ्याक्कै पुरानो क्षेत्रमा हुनेछ जहाँ हामी देख्न सक्छौं 'पाल्माको क्याथेड्रल'। यसमा गोथिक आर्किटेक्चर छ र यसमा हामी 'ला पुर्ता डेल मिरादोर' वा 'गोथिक म्यूजियम' को मजा लिन सक्दछौं।
पाल्माको खाडीमा अर्को अनिवार्य स्टप पनि छ। त्यसको बारेमा 'क्यासल डी बेलभर'। यो १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र धेरै टावरहरू र मुख्य आंगनले बनेको छ। अवश्य पनि, 'लस ​​क्युभस डेल ड्रच' ले तपाईंलाई मोहित पार्छ। त्यहाँ चारवटा गुफाहरू छन् जुन मानकोरको नगरपालिकामा अवस्थित छन्। एयरपोर्टबाट आधा घण्टा हामी सेलर फेला पार्दछौं। एउटा शहर जुन तपाईंले पनि भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँ तपाईं केहि खेलकुद अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ वा केवल यसको सुन्दरताको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसमा समुद्री र हिमालहरूको आरामसंग संयोजन छ। मुख्य नगरपालिकाको अर्को हो Andratx, जोसँग लोभ र चट्टानहरू छन्। पनि परागकण ठूलो भूमिका छ। तपाईं यसको हर्मेटेज, कन्भेन्ट्स वा गोथिक चैपलहरूको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, हामी मल्लोर्कामा भएकोले हामी यसका समुद्री किनारहरू बिर्सन सक्दैनौं।
ती मध्ये केही छन् आरेनल बीच, फोरमेन्टर बीच वा काला मेजर। कुनै श doubt्का बिना, ती प्रत्येकमा हेर्न र अनुभव गर्न आवश्यक चीजहरू हुनेछन्। त्यसो भए, यो पर्याप्त छैन कि तपाईंले अनौंठो सांस्कृतिक पैदल यात्रा गर्नुभयो र अन्तमा, तपाईं एक पूरा दिन र घामको मजा लिनुहुन्छ। के त्यो सेप्टेम्बर सुरु गर्न एकदम राम्रो विचार होईन?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » केवल १२ यूरोको लागि मल्लोर्कामा उडान गर्नुहोस्
नमस्ते मिगुएल एन्जल!
हो, हो, यो पूर्ण सत्य छ। तिनीहरू प्रस्ताव छन् कि बाहिर आउँदै छ र यति कम मूल्यहरु छ, यो सत्य हो कि कहिलेकाँही तिनीहरू केहि घण्टा वा केहि दिनहरुमा रहन्छन्। तसर्थ, कहिलेकाँही जब हामी आरक्षण गर्न चाहन्छौं हामी अब फेला पार्दैनौं। तर तपाइँको प्रश्नको उत्तर दिँदै, यो सत्य हो, यद्यपि यो विश्वास गर्न गाह्रो छ 🙂
तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद।
लामेगो, यस पोर्तुगाली मोतीमा के हेर्ने
Cuervo नदी को स्रोत